အမေရိကန်က နှစ်ချီလစ်လျုရှု့ခံရပြီးနောက် မြန်မာတွင် အာဏာသိမ်းအကြပ်အတည်း ကြီးထွား။ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် စစ်ရေးအရစွက်ဖက်ခြင်းနှင့် အာဏာရှင်အစိုးရများအား အင်အားသုံးဖယ်ရှားခြင်းကို ဘိုင်ဒင်အစိုးပြုလုပ်မည်မဟုတ်ဟု ကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရှင်းလင်း၊ ကန်နှင့် R2P အစဉ်အလာ – H2Oupdatenews
အမေရိကန်က နှစ်ချီလစ်လျုရှု့ခံရပြီးနောက် မြန်မာတွင် အာဏာသိမ်းအကြပ်အတည်း ကြီးထွား။ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် စစ်ရေးအရစွက်ဖက်ခြင်းနှင့် အာဏာရှင်အစိုးရများအား အင်အားသုံးဖယ်ရှားခြင်းကို ဘိုင်ဒင်အစိုးပြုလုပ်မည်မဟုတ်ဟု ကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရှင်းလင်း၊ ကန်နှင့် R2P အစဉ်အလာ
oungmarine11@outlook.com 05/03/2021	No Comments
၀ ါရှင်တန် (AP) – လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ခန့်က အမေရိကန်သည် မြန်မာနိုင်ငံအား သူ၏ အောင်မြင်မှုပြယုဂ်တစ်ခုအဖြစ်ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ အမေရိကန်၏ နှစ်ရှည်လများ အပယ်ခံဘဝ၌ တည်ရှိခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုစဉ်က အိုဘားမားအစိုးရ၏ ရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးပြန်လည်ထူထာင်ခြင်းမှာ အီရန်နှင့်ကျူးဘားကဲ့သို နိုင်ငံများအတွက် စံနမူနာသဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံသည် တပ်မတော်၏ အာဏာသိမ်းမှုက စစ်ဘက်လွှမ်းမိုးမှု ခေါင်းထောင်လာပြီး၊ ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလိုလားသူများ၊ ဂျာနယ်လစ်များအား ရက်စက်စွာဖြိုခွင်း၍ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကြောင့် အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုအသစ နှင့် နိုင်ငံတကာ အပယ်ခံဖြစ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြန်ကြောင်း AP က ယမန်နေ့ရေးသားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြိုလဲမှုမှာ အမေရိကန်၏ အမှားဟု မဆိုနိုင်ချေ။ အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိမြန်မာသည် ၎င်းနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ရှိ မွတ်စလင်လူနည်းစုတို့ အပေါ် စံနစ်တကျ ဖိနှိပ်ခြင်းတွင် စိတ်အားထက်သန်ကာ ဒီမိုကရေစီအရေးတွင် ရှေ့နောက်မညီဖြစ်လာခဲ့သည်။
သမ္မတဘားရက်အိုဘားမားလက်ထက် မြန်မာနှင့် အခိုင်အမာပြန်လည်ဆက်ဆံရေးမတိုင်မီ နှစ်ပေါင်းများစွာ သံတမန်ရေး ယိုယွင်းခဲ့စဉ် အမေရိကန်သည် ထိုစဉ်က အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ယခုအခါ ထိမ်းသိမ်းခံ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်၌သာ အဓိကအာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ ဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်တွင်မူ တရုတ်၏ ဒေသတွင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၊ တရုတ်-အမေရိကန်အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါမှုကိုသာ အဓိကအလေးထားခဲ့သည်။
အိုဘားမားအစိုးရ၏ မျှော်လင့်ချက်နှင့် စောင့်စားမှုတို့သည် ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရပင်ဖြစ်သော ဘိုင်ဒင်လက်ထက်၌ အလှမ်းဝေးလှသော ပင်လယ်ရပ်ခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အထူးသဖြင့် ထီးတည်းဖြစ်နေသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်၏ ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အကန့်အသတ်များ ရှိနေသည်။
ဘားရက်အိုဘားမားသည် သမ္မတအဖြစ် ခရီးစဉ် ၂ ကြိမ်၊ သူ၏နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၂-ဦး ဖြစ်သည့် ဟီလာရီကလင်တန်နှင့် ဂျွန်ကယ်ရီတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အသီးသီးကိုယ်တိုင်လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဟီလာရီကလင်တန်၏ အလည်အပတ်ခရီးမှာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ ပထမဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ ဟီလာရီကလင်တန်သည် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်အား နှစ်ပေါင်းများစွာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည့် ရေကန်ကြီးအနီး၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အိုဘားမားနှင့် ဟီလာရီကလင်တန်တို့က စတင်ခဲ့သော ကနဦး အဖွင့်သည် မြန်မာပြည်အတွက် ခြေလှမ်းသစ်မည်သို့စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အများမျှော်လင့်ချက်ကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က စစ်ခေါင်းဆောင်များသည်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးတွင် တရုတ်အပေါ် အလွန်အမင်းမှီခိုနေရခြင်းကို စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည့် ကာလဖြစ်သည်။
(သမ္မတဦးသိန်းစိန်အပြီး) ဆန္ဒမဲ ၆၀ ရာနှုန်းဖြင့် NLD ပါတီ အာဏာရရှိပြီးနောက် နိုဘယ်လ်ဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ သမ္မတရာထူးပိတ်ပင်ခံရသော်လည်း အစိုးအဖွဲ့အား ဦးဆောင်သူ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မကြာမီ ၎င်းအပေါ် ယုံကြည်ကိုးစားသူများဖြစ်သည့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ (မူရင်းရိုဟင်ဂျာဟု ဖော်ပြ) တို့အရေးကို ဂရုမစိုက်ဖြစ်လာသည်။ ရက်စက်စွာဖိနှိပ်မှုနှင့်အလွဲသုံးခြင်းခံခဲ့ရသည့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီတို့၏ ခံစားချက်များကို အစိုးရ၏ ကုစားမှုမှာ အထူးသဖြင့်မှေးမှိန်လှသည်။ သို့သော်လည်း အိုဘားမားအစိုးရက ဒေါ်စုအပေါ် ဆက်လက်ယုံကြည်နေခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီစနစ် အင်္ဂါမစုံခြင်းနှင့် ရပ်တန့်သွားခြင်းကို အမေရိကန်အစိုးရက မလိုလားပါ။ ဤသို့ နှင့် ၂၀၁၇-ခုနှစ်တွင် ဒေါ်နယ်ထရမ့် သမ္မတဖြစ်လာသည်။ တရုတ်၏ဒေသတွင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျော့ပါးစေရန်ကျယ်ပြန့်စွာ အာရုံစိုက်ခြင်းထက် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားစရာဖြစ်လာရသည့်အဖြစ်မှန်များကို ဂရုမစိုက်ခြင်းမှာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ထရမ့်၏ ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သော ရက်ဇ်တေလာဆန်သည် အမေရိကန်အစိုးရ၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတစ်ဦးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ များမကြာမီ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်း၌ မြန်မာ့တပ်မတော်က ကျောထောက်နောက်ခံပြုသည့် အကြမ်းဖက်မှုများမှာ #လူမျိုးသုတ်သင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က ကြေညာသည်။ နောက်တစ်လအကြာတွင် မြန်မာထိပ်တန်းစစ်ဖက်ခေါင်း ဆောင်များကို အမေရိကန်က ဒဏ်ခတ်အရေးယူလိုက်သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ အမေရိကန်၏ မြန်မာအပေါ် အာရုံစိုက်မှုမှာ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်သွားသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်ဖက်၏ဖြိုခွင်းမှုကို ခုခံပြောဆိုခြင်း၊ နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ပြည်ဝင်ခွင့် ငြင်းပယ်သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်စိတ်ပျက်မိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများသည်သာ အဓိကအားဖြင့် ပြောပလောက်အောင် ရှိခဲ့သည်။
၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲအများဆုံးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမှ ဖေဖော်ဝါ ရီလ ၁ ရက်နေ့၌ မြန်မာ့တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းယူချိန်တွင် ပြည်တွင်း ကိုယ့်ပြဿနာများဖြင့် လုံးချာလိုက်နေသော အမေရိကန်အရာရှိများအနေဖြင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်မရှိ ဖြစ်ပုံရသည်။ ထရမ့်အစိုးရ၏ အိမ်ဖြူတော်နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်များတွင် ဗင်နီဇွဲလား၊ တန်ဇန်နီးယား၊ ယူဂန်ဒါ၊ ကျူးဘား၊ အီရန်နှင့် ရုရှားတို့၏ ဒီမိုကရေစီအရေးပြောဆိုသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ (နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နှင့်ပတ်သက်၍) စစ်ဖက်-အရပ်ဖက်တင်းမာမှုကြီးထွားလာခြင်းအပေါ် လူသိရှင်ကြား မည်သည့်မှတ်ချက်မျှ ထွက်ပေါ် မလာခဲ့ချေ။
ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အာဏာလွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည့် ဘိုင်ဒင်အစိုးရသည်လည်း ရန်ကုန်ရှိအမေရိကန်သံရုံးက အခြားသံရုံးများနှင့် ပူးတွဲကာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကို ထောက်ပံ့ရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသည့် သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကိုပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကို ဆန့်ကျင် ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည့် ဇန်နဝါရီ ၂၉-ရက်နေ့တိုင်အောင် အလားတူ နှုတ်ဆိတ်စွာရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါသတိပေးချက်ကို မြန်မာ့တပ်မတော်က ဂရုမစိုက်ချေ။
အမေရိကန်နှင့် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ ကစားမည့် စွန့်စားပွဲတစ်ခုဖြစ်လာကြောင်း ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ် အမေရိကန်-မြန်မာ ပြည်လည်ပေါင်းထုပ်စဉ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့သူ ဟီလာရီကလင်တန်က ရေးသားပါသည်။ ဟီလာရီမှာ ( ကြုံခဲ့ဖူး၍ ) ကြိုတင် အတပ်ဟောခြင်း ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
တရုတ်၏ရပ်တည်မှုအနေအထားမှာ အမေရိကန်အတွက် ၂၁-ရာစုနှစ် အကြီးမားဆုံးပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုဖြစ်လာကြောင်း၊ အာရှဒေသရှိတရုတ်သည် လက်ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနစ်တကျဖြစ်မှုကို ထိခိုက်စေလောက်အောင် အင်အားပြည့်စုံသည့် တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း #အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး_အန်သိုနီဘလင်ကင် က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောဆိုသည်ဟု nbc News က ယမန်နေ့ရေးသားသည်။
ဂျိုးဘိုင်ဒင်အစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ (၉) ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မတ်လ ၃ ရက်နေ့၌ အန်သိုနီဘလင်ကင်က မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကပ်၊ ကမ္ဘာ့စီးပွါးရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ မဟာမိတ်အရေး၊ ပထဝီနိုင်ငံရေးနှင့် သံတမန်ရေးတို့ ပါဝင်သည်။
ဂျိုးဘိုင်ဒင်သည် သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက် ၂၀၀၉-ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅-ခုနှစ်အထိ ဒုတိယသမ္မတ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ယခု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်သိုနီဘလင်ကင်သည် ၂၀၁၃ မှ ၂၀၁၅-ခုနှစ်အထိ ဒုတိယအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး၊ ၂၀၁၅-ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇-ခုနှစ်အထိ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
အိုဘားမားအစိုးရလက်ထက်တွင် ဘလင်ကင်ကိုယ်တိုင် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအနေဖြင့် လစ်ဗျားတွင် နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်များလေကြောင်းမှ #R2Pထိုးစစ်ဆင်ခြင်းကို ထောက်ခံခဲ့ပြီး ယီမင်တွင် ဆော်ဒီဦးဆောင်သော ညွန့်ပေါင်းတပ်များ၏ စစ်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း ပေါ်လစီကို လက်ခံခဲ့သူဖြစ်သည်။ လစ်ဗျားတွင် ရာစုနှစ်ထက်ဝက်နီးပါး အာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁- ခုနှစ် လစ်ဗျားပြည်သူတို့၏ ကဒါဖီဖယ်ရှားရေး #အာရပ်နွေဦး လူထုအုံကြွမှုတွင် တိုက်လေယာဉ်အသုံးပြု၍ စက်သေနတ်ဖြင့် ပစ်သည်ကို ဆုံးမရန် အမေရိကန်ဦးဆောင်သည့် နေတိုးတပ်များက ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လေကြောင်းမှ ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့သည်။
လစ်ဗျားအစိုးရပြိုကွဲပြီး ထွက်ပြေးသွားသော ကဒါဖီအသတ်ခံရခြင်းအတွက် ဝမ်းသာအားရဖြစ်ခဲ့သော လစ်ဗျားပြည်သူတို့၏ ပျော်ရွှင်မှုမှာ တဒင်္ဂမျှသာ ခံသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေး-ကာကွယ်ရေးုပျက်ပြားခြင်းနှင့်အတူ တောကြောင်များ စစ်ဘုရင်များ ပေါ်ပေါက်လာကာ သွေးချောင်းစီး ပြည်တွင်းစစ်မီး တောက်လောင်လေတော့သည်။ ယနေ့တိုင် ပြိုကွဲလျှက်ရှိသေသာလစ်ဗျားကိုကြည့်ကာ R2P ရေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အတွက် အိုဘားမားကိုယ်တိုင်နှင့် အမေရိကန်အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးသာမက နေတိုးစစ်ဟာချုပ်အဖွဲ့ဝင်များပါ နောင်တရခဲ့ရသည်။
ဂျိုးဘိုင်ဒင်အစိုးရလက်ထက်တွင် အမေရိကန်ပြည်သူတို့အတွက် အကုန်အကျများသော စစ်ရေးအရ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အာဏာရှင်အစိုးရများကို အင်အားသုံးနှိမ်နင်းသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဒီမိုကရေစီကို မြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု ဘလင်ကင်က ဆိုပါသည်။
” ဒီနည်းလမ်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ အရင်က လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်” အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
(( ရှည်လျားသော သတင်းဆောင်းပါး ၂-ပုဒ်ကို အတိုချုံးရလျှင် ကိုဗစ်ကြောင့် ဒေါ်လာထရီလီယမ်ချီကာ အထိနာလျှက်ရှိသော အမေရိကန်သည် ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ရာတွင် မည်သည့် စစ်အင်အားအသုံးပြုခြင်းကိုမဆို ရှောင်လွှဲမည်ဖြစ်ပြီး သံတမန်ရေးနည်းလမ်းဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်မည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်သည် စစ်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း မရှိပါ။ UNSC၏ #နိုင်ငံတကာညွန့်ပေါင်းတပ် ပွဲတိုင်းကျော် ဥရောပနိုင်ငံများနှင့် သြစတေးလျ-နယူးဇီလန်တို့သည်လည်း ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ တရုတ်၏ ခြေလှမ်းနှင့် ၎င်းနိုင်ငံပြည်သူတို့၏ ဘဏ္ဍာငွေကို ငဲ့စောင်းကြည့်နေကြရပါသည်။ ။သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( AP News. March 3, 2021, “ Myanmar coup crisis grows after years of US neglect.By:Matthew Lee. နှင့် nbc News., March 3, 2021, China poses ‘biggest geopolitical test’ for the U.S., Secretary of State Blinken says. By Dan De Luce and Abigail Williams.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီ လျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: လမ်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆဲဆိုခြင်း၊ ကျောက်ခဲ လေးခွများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းသည် မှားယွင်းပါသည်။သို့သော် ထိုသို့ လုပ်ရကောင်းလားဟု သေစေလောက်သော လက်နက်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းသည် ပို၍ မှားယွင်းပါသည်။
Next Next post: မြန်မာနိုင်ငံမှ လူ ၂၀ ကျော် ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်လာပြီးနောက် နယ်ခြားတစ်လျှောက် လုံခြုံ ရေးကို အိန္ဒိယတင်းကြပ်။ ဝင်ရောက်လာသူများတွင် မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သည်ဆိုသော်လည်း အတည် မပြုနိုင်သေး။ နယ်စပ်တလျှောက် နှစ်နိုင်ငံလုံးမှ စစ်သွေးကြွလက်နက်ကိုင်များလည်းရှိနေ